သင့်အိမ်အတွက်ဆိုဖာအသစ်ဝယ်သည့်အခါလူတို့သည်ဤမေးခွန်းများကိုမကြာခဏစဉ်းစားတတ်ကြသည်, ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုသောစတိုင်, ဘယ်ပစ္စည်းကကြာရှည်ခံမလဲ, သားရေသို့မဟုတ်ထည်ဆိုဖာ? တကယ်တော့, ဘတ်ဂျက်ရှိမရှိစဉ်းစားရန်အချက်များအများကြီးရှိပါတယ်, နှစ်သိမ့်မှု, စတိုင်လ်, အားလုံးပြီးနောက် etc စသည်တို့သည်သင်၏အသက်တာ၏အရေးကြီးဆုံးကဏ္ sections တစ်ခုဖြစ်သည်. ထည်ဆိုဖာ vs သားရေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သင်နေထိုင်ပုံ၊ သင်နေထိုင်နေပုံနှင့်၎င်းကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်. ထို့ကြောင့်, သင့်အိမ်အတွက်စံပြဆိုဖာ ၀ ယ်ယူရန်ရည်ညွှန်းရန်အောက်ပါအချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်.
သားရေနဲ့အ ၀ တ်ဆိုဖာကို ၀ ယ်တဲ့အခါဘာတွေစဉ်းစားမလဲ
နှစ်သိမ့်မှုရလာသောအခါ၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားချက်ပေါ် မူတည်၍ ပို၍ ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာန်ကျသည်. ထို့ကြောင့်သင်သာလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းရန်ဖြစ်သည်, ဘယ်တစ်ခုကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုကောင်းနေသည်?
အများအားဖြင့်ခံစားမှုမှာထည်သည်သားရေထက် ပို၍ အဆင်ပြေသည်၊, ပို။ pliable, နှင့်အခန်းအခြေအနေများလျော့နည်းအပူချိန် - တုံ့ပြန်. သို့သော်၎င်းသည်ထည်ပစ္စည်းနှင့်အထောက်အကူစနစ်ပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်. ယေဘုယျအားဖြင့်, ထည်ဆိုဖာများသည်သားရေဆိုဖာများထက်ပိုမိုအသက်ရှူလွယ်ကူစေသည်. သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်လျှင်ပင်, သင်၏ခြေဖဝါးသည်အလွန်ပူ၏, စိုစွတ်သောနှင့် stuffy, ဒါကလူတွေကိုပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီးစိတ်နာကျင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်. သို့သော်, တစ်ခုမှာဂရုစိုက်ရပါမည်, အချို့သောစျေးသက်သက်သာသာရှိသောအထည်များသည်လျော့ရဲရဲဖြစ်လာပြီးကူရှင်များပေါ်တွင်စုပုံလာလိမ့်မည်.
သားရေဆိုဖာသည်, ဒါကြောင့်မကြာခဏရာသီဥတုကလွှမ်းမိုးပါတယ်. ဆောင်းတွင်းမှာ, သားရေဆိုဖာသည်အလွန်အအေးလွန်။ အလွန်ထိရောက်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကအပေါ်စောင်ယူအဖြစ်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်မှတစ် ဦး နီးကပ်မှတက်နွေးပါလိမ့်မယ်. နွေရာသီမှာ, သင့်မှာလေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ခြင်းမရှိရင်တောင်, သားရေဆိုဖာများသည်ထည်ထက်အအေးခံ။ ချွေးထွက်စေပြီးသားရေနှင့်ကပ်စေသည်. သေချာပါတယ်, ကျနော်တို့ရာသီဥတုထိန်းချုပ်မှုအခွအေနေကို install လုပ်ဖို့အကြံပြုပါသည်, သောပူသောရာသီဥတုမှာအများကြီးနှစ်သိမ့်တတ်၏.
သားရေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံသည်. ထည်ဆိုဖာ, နှစ်ခုတူညီတဲ့စတိုင်၌ရှိကြ၏လျှင်, တူညီတဲ့အရည်အသွေးကိုဘောင်နှင့်အတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏, သားရေယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုစျေးကြီးသည်.
Wayfair မှာသားရေရော၊, ကြိုတင်ရလဒ်များသည်သူတို့၏ခြားနားချက်ကိုပြသည်. သားရေသည်အထည်ထက်များစွာမြင့်သည်. ဒါပေမယ့်, ဤသားရေဆိုဖာများ၏ကုန်ကျစရိတ်ထက်ကျော်လွန်သောနာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာများမှပြုလုပ်သောဇိမ်ခံထည်အချို့လည်းရှိသည်. မင်းသက်တောင့်သက်သာနဲ့အပြင်အဆင်ကိုထည့်မစဉ်းစားရင်ထည်ထက်အဆင့်နိမ့်သားရေဆိုဖာအချို့လည်းရှိတယ်. စျေးနှုန်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုဖာ၏အရည်အသွေးနှင့်သက်တမ်းကိုထင်ဟပ်စေသည်, ဒါကြောင့်ပိုက်ဆံအိတ်မှာမပျက်စီးရင်သားရေကအသားထက်အသားပိုရှည်မှာသေချာတယ်.
ထို့ကြောင့်, ပထမဆုံးစဉ်းစားသင့်တာကဘတ်ဂျက်ပါ, ထို့နောက်အိမ်အလှဆင်သည်, မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံ. ကုန်ကျစရိတ်တစ်ဝက်သက်သာစေမယ့်ထည်ဆိုဖာကိုရွေးချယ်တာကပိုသက်သာတယ်. သားရေဆိုဖာများသည်ငွေကြေးအခြေအနေကောင်းများနှင့်ဧည့်ခံခန်းများ ၀ ယ်လိုသူများအတွက်ပိုသင့်တော်သည်. ထည်ဆိုဖာများသည်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်စျေးနှုန်းများရှိလျှင်မိသားစုများအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်.
ယေဘုယျအားဖြင့်, သူတို့၏အိပ်ရာခင်းပုံစံများသည်သားရေထက်ရွေးချယ်မှုပိုပေးသည်, အရောင်များ, ပုံစံမျိုးစုံ, နှင့်ကူရှင်နည်းပညာများ. အကယ်၍ သင်၏အိမ်ကိုအလှဆင်သည့်အခါအ ၀ တ်ဆိုဖာတစ်ထည်ကိုသာထည့်ရန်စဉ်းစားပါ, မင်းအခန်းထဲမှာတွေ့ဖို့ဘယ်စတိုင်လ်နဲ့အရောင်ကိုမဆိုရှာနိုင်တယ်. ၎င်းသည်လူအများစုအတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်, သူတို့ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကနေအကျိုးပြုခေတ်စားနေတဲ့အမေရိကန်ထည်ဆိုဖာတွေကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်, ခေတ်မီပစ္စည်းများ, သိပ္ပံနည်းကျဒီဇိုင်း, တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ကျယ်ဝန်းသက်တောင့်သက်သာရှိသည်.
အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်သော်, အိမ်ပုံစံအနည်းငယ်သည်စူပါအရည်အသွေးမြင့်သားရေဆိုဖာနှင့်လိုက်ဖက်သည်. အခန်းနဲ့အဆင်မပြေရင်, ခေတ်မီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစေလွှတ်နိုင်သည်. သေချာကောင်းမွန်စွာလိုက်ဖက်ညီစွာထည်တစ်ခုတွင်ပွားရန်ခက်ခဲသောအခန်းတစ်ခုသို့ထူးခြားသောကြော့ရှင်းမှုကိုပြသနိုင်သည်. Leather ၏အသုံးအများဆုံးသည် chesterfield ပုံစံဖြစ်ပြီးအလွန်ရိုးရာဖြစ်သည်. သို့သော်, စည်းကမ်းချက်တခုအနေနဲ့, သားရေဆိုဖာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့ထည်ထက် ပို၍ ခေတ်စားသည်. သင်ကခေတ်ပြိုင်ဒါမှမဟုတ်ခေတ်မီတဲ့အသွင်အပြင်ကိုပိုင်ဆိုင်ချင်ရင်, ၎င်းသည်ထည်ဆိုဖာအများစုထက်ပိုချောပြီးပိုအဆင့်မြင့်သည်.
သားရေသို့မဟုတ်အ ၀ တ်ဆိုဖာဖြစ်စေ၎င်းတို့အားလုံးသည်သင့်အိမ်ကိုကြော့ရှင်းပြီးခေတ်မီစေပါသည်, မင်းရဲ့အိပ်ခန်း, မင်းရဲ့ထမင်းစားခန်း, ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ဧည့်ခန်း. ထို့ကြောင့်, ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. မင်းရဲ့ဆိုဖာကိုမင်းဧည့်ခန်းမှာအဓိကဒီဇိုင်းအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ချင်သလား? ဘယ်အလှဆင်ပုံစံကိုပိုကြိုက်လဲ, ခေတ်ဟောင်း (သို့) ခေတ်မီသည်? မင်းအိမ်အတွက်ပိုလွယ်မယ်လို့မင်းမျှော်လင့်လား? ဆိုဖာများရွေးချယ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာဖြစ်သည်.
သက်သာတာအပြင်, ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပုံစံ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည်တွန့်ဆုတ်ရန်သော့ချက်အချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်. သားရေသည်သန့်ရှင်းရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအချိန်ကုန်သက်သာသည်, အထည်များကိုဖုန်စုပ်ပြီးပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုသည်. သားရေဆိုဖာကိုသေချာဂရုစိုက်လျှင်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာရှည်နိုင်သည်. သို့သော်, အက်ကွဲကြောင်းများကွဲခြင်းမှကာကွယ်ရန်တစ်သမတ်တည်းထားသင့်သည်.
ရေစိုခံနိုင်မှုကြောင့်, သင်ပြုသောအရာသည်သန့်ရှင်းသောရေ၌မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုအပြည့်အဝစွတ်ရန်ဖြစ်သည်, အဲဒါကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဆိုဖာမျက်နှာပြင်ကိုသုတ်လိုက်ပါ. သို့သော်, ရေရှည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အထူးဆီလိမ်းခြင်းနှင့် waxing လိုအပ်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, သားရေဆိုဖာသည်တစ်ကယ်ပျက်စီးသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, အပြင်ဘက်အဖုံးကိုအစားထိုး။ မရပါ, ၎င်းသည်ကိုင်တွယ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်. အပြင်, ကြောင်ကဲ့သို့အချို့သောတိရစ္ဆာန်များကိုဆိုဖာကိုကုတ်ခြစ်ရန်သုံးသည်. ပျက်စီးမှုအတွက်, ကြောင်ကိုအာရုံလွှဲရန်ဆိုဖာအစုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကစားစရာအချို့ကိုဝယ်ပါ. သတိပြုရန်မှာသားရေဆိုဖာများသည်ထိန်းသိမ်းရခက်ခဲပြီးခြစ်ရာများကိုပြုပြင်ရန်ခက်ခဲသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်, ဒါကြောင့်သင့်မှာအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များရှိလျှင်, အထည်ဆိုဖာများကပိုသင့်တော်သည်.
အထည်များအတွက်, ၎င်းသည်ထိန်းသိမ်းရပိုမိုလွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းပါသည်. အထည်ဆိုဖာအ ၀ တ်အများစုကိုဖယ်ရှား။ ဆေးကြောနိုင်သည်. မင်းကဒီညစ်ပတ်နေတဲ့အဖုံးကိုကိုင်တွယ်ရတာစိတ်ပူနေတယ်ထင်ရင်, သင်၎င်းကိုဖယ်ရှား။ ခြောက်သွေ့သောသန့်စင်စက်သို့ပို့နိုင်သည်. သင်အပူဒဏ်ကိုစိုးရိမ်လျှင်နွေရာသီရောက်သောအခါဖျာကို ထား၍ ဆောင်းရာသီ၌နွေးထွေးသောအ ၀ တ်ဖြင့်အစားထိုးပါ. သို့သော်, ထည်ဆိုဖာများသည်ဆေးလုံးများဖြစ်ပြီးမကြာခဏသုံးလျှင်ပိုပါးလာသည်, ထို့ကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်ဆိုဖာကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်.
ယေဘူယျအားဖြင့်ဆိုဖာထည်များကိုပိုးသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, ဖဲ, လျှော်, corduroy နှင့်အခြားခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများ. Per တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အင်္ဂါရပ်များရှိသည်. ပိုးနှင့်ဖဲထည်ဆိုဖာများသည်ကြော့ရှင်းမှုနှင့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုဖော်ပြသည်, လူတွေကိုခမ်းနားတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးတယ်. သို့သော်, လျှော်နှင့်ကော်ဖာရွိုင်းဆိုဖာများသည်လေးလံပြီးပိုကြည့်ကောင်းသည်, ၎င်းသည်သဘာဝနှင့်ရိုးရှင်းသောပုံစံကိုဖန်တီးပုံရသည်.
သားရေဆိုဖာပစ္စည်းများအတွက်ရွေးချယ်မှုသည်ကြီးမားသည်, အရမ်း. ကွဲပြားခြားနားသောအသားများသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. သားရေဆိုဖာများ၏အသွင်အပြင်များကိုအဓိကထားသည်, သဘာဝ elasticity, cowhide ၏ခိုင်မာမှု, နူးညံ့သောမျက်နှာပြင်, အရောင်မြင့်မားမြန်ဆန်မှု, elasticity ကောင်းတယ်, လေကြောင်း permeability, နှင့်စက်မှုစွမ်းအားမြင့်မားသည်. အထူးချွန်ဆုံးမှာ၎င်း၏မြင့်မားသောဆွဲအားနှင့်ဆန့်နိုင်အားကိုသားရေဆိုဖာ၏သက်တမ်းကိုတိုးတက်စေသည်. ၎င်းတို့ကိုမကြာခဏနှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲခြားလေ့ရှိသည်, ပါးလွှာသောအသားသို့မဟုတ်ထူသည်. ပါးလွှာသောသားရေဆိုဖာတစ်ခု၏ဒီဇိုင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးတောက်ပသောပုံစံကိုဆိုလိုသည်.
အရည်အသွေးမြင့်သားရေဆိုဖာများသည်နူးညံ့သည်, ထိုင်ရန်အဆင်ပြေသည်, ဆောင်းရာသီ၌ပူ။ နွေရာသီ၌အေးသည်. ပိုကောင်းတဲ့ texture ကြောင့်, အထည်သည်စျေးထက်ပိုစျေးကြီးသည်. ထည်ဆိုဖာအမျိုးအစားများစွာရှိပြီးလူအားလုံးကိုခံစားချက်အမျိုးမျိုးပေးသည်. ပိုးထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဆိုဖာများသည်လူတို့အားမြင့်မြတ်သောခံစားချက်ကိုအမြဲပေးသည်, လျှော်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆိုဖာတွေကပိုရိုးရှင်းပါတယ်. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှ, သားရေဆိုဖာများသည်ပိုမိုတာရှည်ခံသည်.
သားရေဆိုဖာများသည်အမှန်တကယ် hypoallergenic ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏလစ်လျူရှုခဲ့သည့်အချက်တစ်ခုရှိသည်. တစ်စုံတစ်ယောက်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ဓာတ်မတည့်မှုရှိလျှင်, ဒါဆိုဒီဆိုဖာကဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအသုံးမကျဘူး. ဆိုဖာထည်နှင့်မတူ, သားရေဆိုဖာများသည်ဖုန်မှုန့်များကိုနည်းပါးစေသည်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် dander, နှင့်အခြားဓာတ်မတည့်မှုများ, ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်. ဒီတော့, သားရေဆိုဖာကိုကြည်လင်စေသောပူနွေးသောအိပ်ရာခင်းပါသောဆိုဖာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပုံရသည်. သေချာပါတယ်, ဓာတ်မတည့်တဲ့ဆိုဖာတစ်ထည်ကိုထားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး, သို့သော်၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်ပြီးသားရေဆိုဖာထက်ပိုအားထုတ်ရလိမ့်မည်
အ ၀ တ် (သို့) သားရေဆိုဖာတစ်ခု ၀ ယ်တဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့မေးခွန်းအချို့ရှိပါတယ်:
မင်းမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိလား? မင်းရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေလား? အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များအတွက်၎င်းတို့သည်စျေးကြီးသောသားရေကိုသူတို့၏သွားများကိုကုတ်ခြစ်ခြင်းဖြင့်အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်. သို့သော်, သင်ဟာအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုထက်မြက်တဲ့နည်းပြတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်, ဒါဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကောင်းတယ်.
ကလေးရှိပါသလား? ၎င်းတို့သည်အစင်းအားလုံး၏မတော်တဆမှုများဖြစ်လေ့ရှိသည်? ဆိုဖာပေါ်မှာခဏခဏဆော့ကြသလား? အားလုံးဟုတ်လျှင်, ကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်ပါ, သားရေသည်အ ၀ တ်နှင့်ယှဉ်လျှင်ပိုရှည်နိုင်သည်. အရွယ်မရောက်သေးသူကလေးငယ်များ၏အာဏာကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းမရှိသလောက်ပင်, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုလိုအပ်သည်.
သင်၏ဆိုဖာသည်သင်၏ပြောင်းလဲနေသောပုံစံကိုထင်ဟပ်ရန်နှင့်သင်၏အပန်းဖြေမှုလိုအပ်ချက်များကိုစီမံရန်လိုအပ်သောရေရှည်အဖော်ဖြစ်လိမ့်မည်. အ ၀ တ်တစ်ထည်ကိုရွေးချယ်သော်လည်း. သားရေဆိုဖာ (သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်) အနုပညာရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်, ၎င်းသည်သင့်အိမ်ရှိအပိုင်းအစတစ်ခု၏သက်တမ်းရှည်မှုကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်. ကောင်းတယ်၊ ငါတို့မှာရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတယ်.
သားရေနှင့်အ ၀ တ်ဆိုဖာကို ၀ ယ်သောအခါမည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း
1. အလုံအလောက်တင်းကျပ်သောအပြင်ဘက်ရှိအဖုံးကိုစစ်ဆေးပါ. အသွင်အပြင်ကိုလွှမ်းမိုးရန်မလိုလားအပ်သောအရေးအကြောင်းများနှင့်ခေါက်များမရှိကြောင်းသေချာပါစေ.
2. ဆိုဖာ၏မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်သည်ပြားနေသင့်သည်, ချိတ်မရှိ, လက်သည်းပြူး, သို့မဟုတ်ချည်မျှင်များ, လူတို့ကိုထိခိုက်စေမည့်အဝတ်အစားများ.
3. သတ္ထုသို့မဟုတ်သစ်သားဘောင်ကိုထိလျှင်, အနားအဖုံးသည်အချိန်တိုအတွင်း ၀ တ်ရန်လွယ်ကူသည်ကိုဆိုလိုသည်, အထူးသဖြင့်ထိုင်နေရာအနီး.
4. ပုံစံများကိုလိုက်ဖက်မှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်ပါ, အလှဆင်ရန်သုံးသောချုပ်ရိုးများကိုအညီအမျှခွာပါ.
5. ထိုင်ခုံ၏ရှေ့အစွန်းတွင်ကူရှင်ကိုမရပ်သင့်ပါ. ကူရှင်များအကြားဆက်သွယ်မှုသည်အတတ်နိုင်ဆုံးကျဉ်းမြောင်းသင့်သည်, armrests, backrest, ဆိုဖာနှင့်.
6. လက်ရုံးနှင့်ဆိုဖာခြေထောက်များတည်ငြိမ်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ, သစ်သားမျက်နှာပြင်သည်ချောမွေ့သည်. ကူရှင်သည်လုံလောက်သောအထောက်အပံ့ရှိရမည်ဖြစ်ပြီးဆိုဖာနောက်သို့လိုက်လျောညီထွေရှိရမည်.
7. သားရေဆိုဖာတွင်မကြာခဏမမြင်သာသောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များရှိသည်, အစွန်းအထင်းလေးများပင်, ထို့ကြောင့်နေရာတိုင်း၌သားရေအရောင်များကိုဂရုပြုပါ.
စားသုံးသူအများစုသည်အ ၀ တ်ထည်နှင့်သားရေအမျိုးအစားများကိုအ ၀ တ်နှင့်သားရေကောက်ရန်အထောက်အကူပြုသည့်အမျိုးအစားများကိုသင်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပေ. အ ၀ တ်ထည်အမျိုးအစားများသည်သဘာဝအမျှင်များ (သို့) လူလုပ်သောအမျှင်များဖြစ်သည်. ဤတွင်ကွဲပြားသောအထည်ရွေးချယ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါသင်တွေ့နိုင်သောချည်မျှင်များကိုအကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက်သည်.
သဘာဝအမျှင်များသည်အပင်များသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များမှရရှိသောစဉ်ဆက်မပြတ်အမျှင်ဓာတ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်. သူတို့သည်ပျော့ပျောင်းတတ်သည်, အလှဆင်ဖို့နဲ့သာယာလှပတယ်, ထိတွေ့ရန်အဆင်ပြေသည်. အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များကဲ့သို့သဘာဝအမျှင်လေးမျိုးရှိသည်.
အပူပေးပြီးနွေးအောင်ထားပါ; တာရှည်ခံသည်, အခြားအထည်များထက်အလေးချိန်; အရေးအကြောင်းနှင့်အစွန်းအထင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်; အရောင်ကိုအလွယ်တကူဝတ်ဆင်ပါ, fade ခံနိုင်ရည်; ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှား, အနံ့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
မျက်နှာပြင်သည်ချောမွေ့သည်, နူးညံ့သော်လည်းမချော; သဘာဝဆဲလ်သေ albumen ကြောင့်အသားအရေနှင့်ဆံပင်ကိုဂရုစိုက်သည်; အရောင်ဆိုးဆေးများနှင့်ပုံနှိပ်သည်; ချွေးထွက်ခြင်းကြောင့်အားနည်းလာသည်, နေ, ဆပ်ပြာ; မြေဆီလွှာကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်, အနာ, ဖလံ; အထူးဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်, အခြောက်လျှော်
သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအသက်ရှူနိုင်သည်; ဓာတုပစ္စည်းများမပါသောသဘာဝအမျှင်များ; Hypoallergenic ဖြစ်ပြီးအရေပြားကိုမထိခိုက်စေပါ။; ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲနှင့်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။; စက်ဆေးခြင်း။; ကျုံ့နိုင်ခြေအများကြီးရှိပါတယ်။; သဘာဝအမျှင်များလျင်မြန်စွာကျုံ့သည်
သဘာဝအမျှင်ဓာတ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေသည်; ထုတ်လုပ်ရန်လုပ်အားအလွန်လိုအပ်သည်; ထုံးစံအတိုင်း, ပိုးသတ်ဆေး; အစိုဓာတ်ကိုကောင်းစွာစုပ်ယူသည် 20% ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်; ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတုတွင်ထူးခြားအေးမြမှုနှင့်လတ်ဆတ်မှု; Hypoallergenic ဖြစ်သည်, ထိခိုက်လွယ်သောအသားအရေ (သို့) ဓာတ်မတည့်သူများအတွက်သင့်တော်သည်; မှိုနှင့်ချွေးထွက်ခြင်းဒဏ်; အတွန့်များကိုဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲသည်
Synthetic လူလုပ်ဖိုင်ဘာကိုလူသားများကဓာတုဗေဒပေါင်းစပ်မှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်, သက်ရှိများမှတိုက်ရိုက်ဆင်းသက်သောသဘာဝအမျှင်များနှင့်ဆန့်ကျင်သည်. ၎င်းတို့တွင်နိုင်လွန်ပါဝင်သည်, polyester, acrylic, polyolefin ဗီနိုင်း, စသည်တို့. ဤတွင်ဤလူလုပ်အမျှင်အမျိုးအစားများ၏အင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည်.
ဆန့်ခြင်းနှင့်ကျုံ့ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်; လျှော်နိုင် (သို့) အခြောက်လျှော်နိုင်သည်; အရေးအကြောင်းများကိုခုခံနိုင်သဖြင့်လွယ်ကူစွာဂရုစိုက်ပါ, နွမ်းသည်။; ဓာတုပစ္စည်းအများစုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်; မှို (သို့) ရေစုပ်မည်မဟုတ်ပါ; အငြိမ်နှင့် pilling ပြဿနာများ; အဆီအစွန်းများသည်ဖယ်ရှားရခက်သည်; သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မကိုက်ညီပါ
ပလတ်စတစ်အမှုန်လေးများအရည်ပျော်ခြင်းမှထုတ်လုပ်သည်, အလွန်မီးလောင်လွယ်သည်; မြင့်မားသောဆွဲအား; တာရှည်ခံသည်, အစွန်းအထင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်; အမြောက်အများနှင့်အဖုံးကောင်းသည်; ၎င်း၏အရောင်ကိုကိုင်ထားသည် ; ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်းသည်, ဆေးသုတ်ရန်ခက်သည်; ပစ္စည်းများသည်ယိုယွင်းမှုကိုပြနိုင်သည်
ပေါ့ပါးသည်, ပျော့ပျောင်းသည်, နှင့်နွေးထွေး, သိုးမွေးကဲ့သို့လက်; အခြားအမျှင်များကိုတုပနိုင်သည်, ချည်ကဲ့သို့; အရောင်များကိုတောက်ပသောအရောင်များသို့ပြောင်းပါ; ဓာတ်မတည့်ခြင်း; ပိုးမွှားများကိုကြံ့ကြံ့ခံသည်, ဆီ, ဓာတုပစ္စည်းများ, နေရောင်ခြည်; ခန္ဓာကိုယ်မှအစိုဓာတ်ကိုစုပ် ယူ၍ ဆေးကြောနိုင်သည်; သွားကိုက်ခြင်းနှင့်ပွန်းပဲ့ခြင်းပြသနာများကိုခံစားရသည်
ခိုင်ခံ့သော်လည်းအခြားအသုံးများသောအမျှင်များထက်အလေးချိန်ပိုနည်းသည်; ဆွဲဆန့်နိုင်သောပစ္စည်းအများစု ; အစိုဓာတ်ကိုအလွန်စုပ်ယူသည်, အသက်ရှုနိုင်သော; ပျက်စီးခြင်းကိုအလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်, ပုံစံခွက်, အနာနှင့်တွန့်ခြင်း; ဆေးကြောရလွယ်ကူသည်, ၎င်းသည်ဆီယိုဖိတ်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။; နေရောင်ခြည်ဒဏ်နှင့်, အသက်အရွယ်အလိုက်အဝါရောင်; ရေနံနှင့်ဓာတုပစ္စည်းအများစုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်; လောင်ကျွမ်းမှုနှင့်အရည်ပျော်မှတ်နိမ့်သည်
ပိုးနှင့်ဆင်တူမိတ်ဆက်သည်, သိုးမွေး, ဒါမှမဟုတ်ဝါဂွမ်း
အငြိမ်သို့မဟုတ် pilling ပြဿနာမရှိပါ
အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်, ခန္ဓာကိုယ်အဆီ, နှင့်ရေ
သားရေနှင့်ထည်ဆိုဖာ - မည်သည့်စတိုင်အတွက်မဆိုပြီးပြည့်စုံသောရောစပ်မှု
အကြံဥာဏ်တွေအများကြီးပေးနေပေမယ့်လည်း, တစ်ယောက်ယောက်ကသားရေ (သို့) အ ၀ တ်အတွက်ဘယ်ဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ချီတုံချတုံဖြစ်နေတုန်းလို့ထင်ပါတယ်. ဒီနေရာမှာမင်းအခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်စလုံးရှိဖို့နဲ့မင်းရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ပုံစံနဲ့လိုက်ဖက်မယ့်လှပတဲ့သားရေနဲ့ထည်ဆိုဖာကိုရောစပ်ဖို့နောက်ထပ်စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုကိုပြလိမ့်မယ်။.
သားရေနှင့်အ ၀ တ်ဆိုဖာနှစ်ခုလုံးကိုကျေးလက်နှင့်မြေထဲပင်လယ်အတွင်းပိုင်းရောစပ်ထားသည်, ကြွယ်ဝပြီးချောမွေ့သော texture ကိုပိုင်ဆိုင်သည်, အရောင်ဖျော့ဖျော့နှင့်နွေးထွေးမှုကိုခံစားရစေသည်. သားရေဆိုဖာသည်အမြဲတမ်းဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့်စတိုင်လ်ကျစွာပေါင်းစပ်ထားသောဂန္ထဝင်ပရိဘောဂတစ်မျိုးဖြစ်သည်. ထည်ကူရှင်, သို့သော်ငြားလည်း, ဘုံသက်သာမှုကိုပေးသည်, နွေးထွေးမှုနှင့်အိမ်တွင်းခံစားမှု. ၎င်းတို့ကိုကျေးလက်အတွင်းပိုင်းများနှင့်ရောစပ်လိုက်သည်, သားရေနှင့်ထည်ဆိုဖာကူရှင်သည်ဧည့်သည်များအားလာရောက်လေ့လာရန်ဖိတ်ကြားသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောအသွင်အပြင်ကိုပြလိမ့်မည်. အသံပျော့သောခေါင်းအုံးများသည်ဆိုဖာမှပြီးပြည့်စုံသောအပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဆိုဖာ၏ပန်းများနှင့်တန်ဆာဆင်ထားသောပုံစံများသည်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ခြင်းမှအခြားဆွဲဆောင်မှုကျက်သရေကိုထုတ်လွှတ်သည်. မင်းမီးဘေးမှာထိုင်ပြီးသစ်သားအက်ကွဲတာနဲ့မီးတောက်ရဲ့ကခုန်တာကိုခံစားကြည့်ပါ. ၎င်းသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးအတွင်းငြိမ်းချမ်းမှုတစ်ခုမဟုတ်ပေ?
သားရေနှင့်ထည်ဆိုဖာ, ၎င်းသည်ပိုမိုရိုးရာဒီဇိုင်းများအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်း, ခေတ်သစ်အတွင်းပိုင်းတွေမှာသူတို့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အနေအထားကိုငါတို့တွေ့ခဲ့တယ်. ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်မျဉ်းများ, လိုက်ဖက်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်များသည်ထူးခြားသောခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းကိုပေါ်လွင်စေသည်, ၎င်းသည်ခေတ်ပြိုင်ဆိုဖာ၏ပုံမှန်အမြင်ဖြစ်သည်. အရောင် palette သည် classic black ကိုအဓိကထားသည်, ဖြူစင်သည်, အပြာရင့်ရောင်, သို့မဟုတ်ဤအရောင်တုံးများပေါင်းစပ်ခြင်း, ခေတ်စားသောမီးခိုးရောင်အရောင်အဖြစ်. မီးခိုးရောင်သည်အဖြူရောင်ကိုအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်တို့နှင့်ကောင်းစွာပေါင်းစပ်ထားသည်. သားရေနှင့်အထည်ရောစပ်မှုသည်အဆုံးစွန်သောပုံမှန်မဟုတ်သောသက်တောင့်သက်သာနှင့်စတိုင်လ်ကိုပေးသည်။ သို့သော်လုံးဝမထူးဆန်းပါ. လှပသောအပိုင်းဆိုဖာများ (သို့) ထောင့်ဆိုဖာများသည်သင်၏ဧည့်သည်များနှင့်မိသားစုအတွက်ထိုင်စရာနေရာဖြစ်သည်, ခေတ်ပြိုင်နှင့်ရိုးရှင်းသောအတွင်းပိုင်းများတွင်အလွယ်တကူရောစပ်နိုင်သော. အလှဆင်ခေါင်းအုံးများသည်အခြေခံအရောင် (သို့) အလှဆင်ပုံစံများမပါဘဲအရောင်တစ်ရောင်၏အရိပ်အနည်းငယ်ပါ ၀ င်သည်. ခေတ်မီဒီဇိုင်းဖြင့်သားရေနှင့်အ ၀ တ်ဆိုဖာသည်အခန်း၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သည့်စကားပြောဆိုမှုအပိုင်းအစဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်. Modular configurations များသည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့် ဦး စားပေးအတိုင်းထိုင်ခုံများကိုပြန်လည်စီစဉ်ရန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်.
ဆိုဖာသည်အခန်းတစ်ခန်းလုံး၌မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ပင်ပန်းခြင်းနှင့်မကောင်းသောစိတ်အခြေအနေများ. ၎င်းသည်နေ့စဉ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးပူနွေးသောအရာများဖြစ်ပေါ်နေသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ပုံစံထောင်ချီတဲ့သားရေဒါမှမဟုတ်အ ၀ တ်ဆိုဖာကိုရွေးရခက်တယ်လို့ငါယုံတယ်. သို့သော်, အဖြေကဘယ်ဟာကပိုကောင်းမလဲမသေချာဘူးဆိုတာမင်းနဲ့မင်းမိသားစုအတွက်ဘဲ. မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အိမ်ပုံစံမျိုးကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေပါစေ, ၎င်းသည်ရွေးချယ်ရန်နှစ်သက်စရာကောင်းသောအရာဖြစ်လိမ့်မည်.